Oge Neogene: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Network Meteorology
E kewara oge Cenozoic n'oge dị iche iche, na n'aka nke ya, ghọọ oge dị iche iche. Taa, anyị ga-ekwu maka oge nke abụọ nke oge a ma ọ bụ Neogene. Ọ malitere ihe dịka nde 23 afọ gara aga wee kwụsị nde afọ 2.6 gara aga. Ọ bụ oge mgbe mbara ụwa gbanwere na mgbanwe dị iche iche na mbara ala na ọkwa dịgasị iche iche. Otu n’ime ihe omume dị oke mkpa n’oge a dị mkpa bụ ọdịdị nke Australopithecus, otu n’ime ụdị ndị dị mkpa tupu agafe Homo sapiens.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Neogene na mkpa ọ dị na mbara ala.
4 Neogene osisi
Oge Neogene bu nke mbara ala anyi nwetara oru banyere ihe banyere ala Mgbagharị kọntinent dị ka ọ dị n'oké osimiri. Ma nke ahụ bụ kọntinent gara n'ihu na-akwaga n'ebe ha nọ ugbu a n'ihi na ije nke efere tectonics kpatara convection ugbu a nke uwe elu ụwa.
N'ihi ngagharị a nke efere kọntinent ahụ, ọrụ ụgbọ mmiri agbanweela. A gbanwere mmiri mmiri ahụ ebe ọ bụ na ụdị ihe mgbochi anụ ahụ na mgbanwe nke usoro ifufe bilitere n'ihi mgbanwe nke ihu igwe. Ihe omume a dị oke mkpa dịka ọ nwere nsonaazụ ozugbo na okpomoku nke Oke Osimiri Atlantic. Otu n'ime ihe mgbochi anụ ahụ kachasị mkpa nke kpatara n'ihi mbugharị efere a bụ ala ala Panama.
N’oge a, ụdị dị iche iche dịgasịkwa iche iche nke ọma. Otu terrestrial groups nke mammals bụ ndị gbanwere mgbanwe kachasị. N'aka nke ọzọ, nnụnụ, na-akpụ akpụ na gburugburu mmiri nwere nnukwu ọganiihu evolushọn.
Dịka anyị kwurula na mbụ, nke a bụ oge ebe enwere nnukwu ọrụ geological site na echiche orogenic na site na echiche nke ntụgharị ụwa. Mpekere nke Pangea gara n'ihu yana nke mpempe akwụkwọ dịgasị iche dị iche iche ewepụtara mwepụ n'akụkụ dị iche iche.
N'ime oge a niile, ọtụtụ ala dakwasịrị ndịda Eurasia. Ndi mmadu a bu North Africa na nke kwekọrọ na India. India enweghị ike ịbụ akụkụ nke nwere ọpụpụ kọntinent nke ya mana ọ na-agbanye aka na Eurasia. Nke a bụ otú otu ndị bi na kọntinent si bilie wee mepụta okwu nke anyị maara taa dịka Himalaya.
Mpụta nke ala warawara nke Panama nwere nsonaazụ ozugbo na mgbanwe dị ukwuu nke ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa dum. Karịsịa, ọ wakporo okpomọkụ nke Oke Osimiri Pasifik na Atlantic, na-eme ka ha belata.
N'ihe banyere ihu igwe, n'oge a niile, ihe kachasị emetụta ụwa anyị bụ mbelata nke okpomọkụ ụwa. Karịsịa, ókèala ndị dị na mgbago ugwu nwere ihu igwe dịtụ mma karịa nke dị na mpaghara ndịda. N'otu ụzọ ahụ, ihu igwe gbanwere ka oge na-aga, ya mere usoro okike dị adị. Mgbanwe ndị a na mbara igwe bụ n'ihi mgbanwe mgbanwe mgbanwe na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ nke ụwa na-agbanwe agbanwe nyere.
N'ụzọ dị otú a, nnukwu oke ọhịa enweghị ike ịgbanwe ma gbanwee maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ, ya mere, ha furu efu na-enye usoro ndụ na gburugburu ebe ahịhịa na savannas nwere ọtụtụ ahịhịa ndụ. N'ime oge a nile, ice kpuchiri okporo osisi nke ụwa dị ka ọ dị taa. Ihe ndi ozo bu nke nwere ahihia nke otutu ahihia ahihia na osisi ndi ozo di iche iche bu conif.
N'oge Neogene enwere ndọtị nke ụdị ndụ dị adị kemgbe Paleogene. Igwe ihu igwe ihu igwe nwere mmetụta dị ukwuu na mmepe na ntọala nke ihe ọhụrụ dị ndụ. Mgbanwe nke mmegharị na gburugburu ebe ndị a nwere ike ịmepụta ụdị ndụ ọhụụ. Anụmanụ ahụ bụ nke nwetara ọtụtụ ihe dị iche iche ebe ọ bụ na ahịhịa ahụ nọgidere na-adịtụ ntakịrị karịa n'ihi mbelata okpomọkụ na ọkwa ụwa.
Okpu mmiri amachi oke ohia ebe mmepe nke oke ohia ma o bu oke ohia nwere mbido buru oke ibu ma me kwa ka hectare buru ibu n’ime ha puo. Ebe ọ bụ na enweghị ike ịhụ oke ọhịa na oke ọhịa na oke okpomọkụ dị otu a, E mepụtara ahịhịa nke nwere ike imeghari gburugburu ebe okpomọkụ dị ala, dịka ahịhịa ndụ.
Fọdụ ndị ọkachamara na-ezo aka n'oge a mgbe ha rụtụrụ aka na ọkwa flora dị ka »Oge nke ahịhịa». Ọbụghị n'ihi nke a, ọtụtụ ụdị angiosperms nwere ike ịmalite ma zụlite nke ọma.
Banyere anụmanụ nke Neogene, anyị nwere ike ịhụ na enwere ọtụtụ ọdịiche nke ọtụtụ anụmanụ dị iche iche anyị maara taa. Otu kachasị nwee mmeri bụ anụ na-akpụ akpụ, nnụnụ, na anụmanụ na-enye ara. Anyị enweghị ike ichefu usoro okike mmiri ebe ndị otu anụ ọhịa nwekwara nnukwu mgbanwe.
Nnụnụ nke usoro nke passerines na a na-akpọ "nnụnụ ụjọ" bụ ndị na-tumadi dị na kọntinent America. Taa, nnụnụ nke usoro nke passerines bụ ụdị dịgasị iche iche na nke sara mbara karịa. Nke a bụ n'ihi na ha jisiri ike na-adị ndụ ruo ogologo oge ma bụrụ nke e ji mara ọkachasị n'ihi na ụkwụ ha na-enye ha ohere ịda n'ala n'ala alaka osisi. Na mgbakwunye, ha nwere ikike ịbụ abụ ma nke a na - eme ha ka ha nwee emume mmekọrịta dị omimi.
N'ime ụmụ anụmanụ, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ya nwegasịrị ọtụtụ ihe. Niile Ezinụlọ Bovidae bụ nke ewu, nne na-azụ, atụrụ na, n'aka nke ọzọ, ndị sitere na ezinụlọ Cervidae, ebe mgbada na mgbada diri ha gbasaa ebe ha di uku.
Otu umu anumanu nke gosiputara ihe di oke mkpa na usoro mgbanwe ohuru bu nke hominid mbu. Ọ bụ Australopithecus ma ejiri obere obere ya na ụkwụ ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Neogene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Oge Neogene